ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲခံစားရန်ကဘယ်လို
အားဖြင့် ကက်သရင်း Monreal
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ပင်လယ်. 27 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
အသစ်စုံတွဲဟာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲ overthink လွန်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာ. ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အမှန်တကယ်အတူတကွရပြီမီအလားအလာကောင်းသည့်လေးနက်သို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖြစ်ပျက်နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အရာများအကြောင်းကိုမိမိတို့ခေါင်းပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေကစား. အခြားသူကိုသိရန်ရတဲ့၏အဓိကစိတ်ကူးသူတို့ကောင်းတစ်ဦးအထင်အမြင်လုပ်နေပါတယ်ဖြစ်စေမအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ကျောထိုင်ခုံကြာ – သူတို့သိပ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာထိနေကြတယ်, သိပ်စကားပြောနေတာ, လုံလောက်တဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး, ပေါ်ပေါ်.
ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအားသိမ့်နှင့်နားထောင်ခြင်းနှင့်သူတို့ပြောနေသည့်အရာကိုတုံ့ပြန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်သင့်. သင်ပြောမသွားနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကတော့သင်သို့မဟုတ်သူသို့မဟုတ်သူမပြောနေတာနေစဉ်လုပ်နေတာမဟုတ်နေကြပါတယ်ဘာတွေကူးသွားကြသောအခါကိုသင်မည်သို့အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့စကားကိုနားထောင်နိုင်ပါ? သင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်, သင်အမှန်တကယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သင့်ရဲ့အချိန်ကိုဖြုန်းခြင်းနှင့်အဓိကအာရုံစိုက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပေါ်မှာရှိသင့်ကြောင်းမေ့နေကြတယ်. သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူတနေကုန်သုံးဖြုန်း; ကိုယ့်ဟာကိုယ်ချိုးပေးနဲ့အခြားသူတစ်ဦးနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်း.
ဒါကြောင့်, သင်သည်သင်၏ဦးခေါင်းမှထွက်ရနှင့်ပစ္စုပ္ပန်အခိုက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. သူသည်သင်တို့ကိုဆက်စပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘာပြောနေ? သူသည်သင့်အကြောင်းကိုပိုမိုသိရန်လိုအဘယ်သို့ပြုနေသည်? နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အိုင်ဒီယာကိုဤလွန်းသည်သူ၏ပထမဆုံးနေ့စွဲကြောင်းသတိရဖို့ဖြစ်တယ်, သူကအများစုဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်နည်းတူအာရုံကြောသင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏. သူသည်သင်တို့အတွက်တံခါးဖွင့်လှစ်ရန်မေ့လျော့ခဲ့ပါ? ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ကုလားထိုင်ဆွဲထုတ်မ? သူမကျွန်တော့်ကိုသူကိုယ်တိုင်အကြောင်းပြောနေတာနှင့်သင်မေးခွန်းများမေးမခံကြပုံရသည်ပါသလား? သင်ကအခြားလူတစ်ဦးဦးနှောက်အာရုံကြောလွန်းသောရှုထောင့်မှထိုအခြေအနေမျိုးကိုမြင်သောအခါ, ညဉ့်၏ကျန်ဦးတည်သွားစေလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ သွား. ကြည့်ကြကုန်အံ့ရန်လွယ်ကူသည်.
သင်မကောင်းမှုအသက်ရှု ပတ်သက်. ဦးနှောက်အာရုံကြောရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ်အိတ်ကပ်ထဲတွင်အချို့ Mint ကိုစောင့်ရှောက်. ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာသင်နှင့်အတူအချို့သော Kleenex တစ်ခုသို့မဟုတ်လက်ကိုင်ပဝါရှိသည်တို့အားကောင်းသောလိမ့်မည်. သင်သည်တပြင်လုံးကိုဆေးဝါးကက်ဘိနက်အဖွဲ့ကိုရောက်စေရန်မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်နှင့်အတူအနည်းငယ်အမှုအရာရှိခြင်းသို့မဟုတ်သင်နှင့်နီးစပ်ပိုငြိမ်ဝပ်သင်သည်သွင်းရန်အထောက်အကူပြုမည်.
ဤအမှုအပေါင်းတို့အားအဓိကအချက်ကတော့သင့်ရဲ့နေ့စွဲပျော်စရာရှိခြင်းနှင့်သူ၏သို့မဟုတ်သူမ၏ကုမ္ပဏီပျော်မွေ့နဲ့အချိန်ဖြုန်းဖို့ဖြစ်တယ်. ဘဝအသက်တာတို့ဖြစ်ပျက်နဲ့တခါတလေစီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းအမှုအရာမလိုက်မသွားဘူး. သင်ပွင့်လင်းစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်လျှင် (နှင့်နှလုံး) သင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်သမျှနှင့်အတူလှိမ့်နိုင်. ဒါဟာအများအပြားရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲဖြစ်မည်အကြောင်း. ကဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့!
သင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile ဓာတ်ပုံနှင့်အတူအထင်ကြီး
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ Bump ကျော်ရရန်အားမည်သို့